August, 2018 | Otu Di na Nwunye
August 21, 2018 + Japan, Nyocha
Ihe mere i ji kwesị ịga na Kinosaki, Japan
Ịgafe njem ọzọ, wee chọpụtakwuo ihe gbasara ụwa, ịbịakọta bọket gbanwere. Ndị njem na-achọ mgbanwe - na-apụ na nnukwu obodo, obodo ukwu, ma na-adọta ha miri emi n'ime njem ha. Anyị na-achọ ahụmahụ miri emi, na ọdịbendị bara ọgaranya. Ọ na-agụsi anyị agụụ ike ịchọpụta ebe ndị njem ndị ọzọ ahụbeghị, ha akọwabeghị ya, ma ọ bụrụ na anyị nwere afọ ojuju, anụtụbeghị. Kinosaki, Japan ... GỤKWUO
August 16, 2018 + inspirational, Nhazi njem
Ihe 8 Ị Kwesịrị Ịme Mgbe Ị Na-agagharị
Ọtụtụ mgbe, magazin njem, blọọgụ, na ndị dere akwụkwọ a ma ama ga-agwa gị banyere ihe ị kwesịrị ime mgbe ị na-eme njem. Ha ga-agwa gị otu esi abịa, ebe ị ga-anọ, na ihe ị ga-eme ka ị nwee ahụmahụ dị ukwuu, ma nwee olileanya na ị ga-ahụ onwe gị na ndị obodo. Otú ọ dị, anyị achọpụtala na ihe na-eme ka onye njem nleta ezumike ngwa ngwa karịa ihe ọ bụla abụghị ihe ha na-emeghị, ... GỤKWUO